Isixhobo sokuBuyisa idatha. Ukufumana kwakhona uLost & Iifayile Ezicinyiweyo.
DataNumen Data Recovery Ingaba i eyona isixhobo sokubuyisela idatha kwihlabathi. Inokubuyisa lost kwaye ucime iifayile kunye neefolda kwiidrive zakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswa ilahleko kwiintlekele zedatha.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,643)
Ngoba DataNumen Data Recovery?
Imveliso yakho yayiyeyona ilungileyo kwaye yenza i-most! Kodwa andicingi ukuba ikhona into enokubuyisa idatha endiyi lost. Ifumene le bendisele ndinayo, ebingaphezulu
Eyona GUI iphambili
Khetha uMthombo weDrive okanye iDisk
Khetha Khetha kwakhona
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Data Recovery v2.4
Xhasa zonke iintlobo zeenkqubo zefayile, kubandakanya NTFS, FAT, FAT32 kunye ne-Ext2.
Inkxaso yokufumana kwakhona iifayile lost ngenxa yohlengahlengiso lwedrive, urhwaphilizo lwedrive okanye naziphi na ezinye izizathu.
Inkxaso yokufumana kwakhona imilambo enxulumene ne-lost kwaye ucime iifayile.
Inkxaso yokuskena idatha yediski eluhlaza ngokupheleleyo kwaye ukhangele i-lost kwaye ucime iifayile ezingaphezu kwe-70 zeendidi ezaziwayo, ngokusebenzisa inkqubo yangaphakathi yengcali enolwazi olunzulu malunga neempawu kunye nolwakhiwo lwefayile echaziweyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona lost kunye neefolda ezicinyiweyo kunye nefolda yonkerarchy ephindayo.
Inkxaso yokucoca ulungelelwaniso lost nokucima iifayile kunye neefolda ngokweekhrayitheriya ezahlukeneyo.
usebenzisa DataNumen Data Recovery Ukufumana kwakhona iiFayile kwiiDrives zakho
Uyifomatha idrive yakho ngempazamo, ucime umphelo iifayile okanye iifolda kwimoto yakho ngempazamo, okanye ukhuphele umgqomo wakho wokuphinda usebenzise kwakhona ngaphambi kokuba ufumane ukuba kukho into ebalulekileyo kuwo. Ungenzani?
Akukho maxhala. DataNumen Data Recovery inokukunceda. Ungasisebenzisa esi sixhobo sinamandla ukuskena ukuqhuba, khangela i lost kwaye ucime iifayile, uzifumane kwaye ufumane i-most idatha exabisekileyo ibuyela kuwe.
Unokukhetha i-drive okanye idiski eza kuskenwa, emva koko ucofe iqhosha u "Kulungile" ku starInkqubo yokuskena.
Phawula: Ngaphambi kokuskena idrive okanye idiski, qiniseka ukuba akukho fayile okanye iifolda kwiidrive okanye kwidiski evulwayo. Kwaye azikho ezinye izicelo ezingena kwi-drive okanye kwidiski.
Ngenye indlela, unokukhetha le nto ilandelayo yemenyu:
ukuskena ifayile yomfanekiso endaweni yedrive okanye idiski.
Unokukhetha le nto yemenyu:
ukuvula le ncoko ilandelayo:
kwaye usete ukhetho lokuskena ngaphambi kwenkqubo yokuskena.
Emva kwe- starinkqubo yokuvavanya, ibha yenkqubela phambili
iya kubonisa inkqubela phambili yokuskena. Ngexesha lenkqubo, unokucofa iqhosha lokumisa inkqubo yokuskena.
Emva kwenkqubo yokuskena, ukuba ikhona i-lost Ukucinywa kweefayile okanye iifolda kuyafumaneka, uya kubona umbono weefayile:
Jonga iifayile okanye iifolda ofuna ukuzibuyisa, emva koko ucofe iqhosha, uya kubona le dialog ilandelayo:
Ungaseta ulawulo lwemveliso kwincoko yababini kwaye ucofe iqhosha u "Kulungile" ku start ukubuyisa izinto ezihloliweyo.
DataNumen Data Recovery iya kuthi emva koko iphinde ibuyisele zonke izinto ezihloliweyo kuwe. Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, le bhokisi ilandelayo yemiyalezo iya kuvela:
Emva koko unokuvula umkhombandlela wokuphuma kunye nokufikelela kuzo zonke izinto ezifunyenweyo.
DataNumen Data Recovery 2.4 ikhutshwa nge-9 kaNovemba ngo-2020
DataNumen Data Recovery 2.3 ikhutshwa nge-14 ka-Epreli 2020
DataNumen Data Recovery 2.2 ikhutshwa nge-28 kaFebruwari, 2020
Inkxaso yokujonga iifayile ezizezinye.
Inkxaso yokulungelelanisa ubungakanani bemifanekiso.
DataNumen Data Recovery 2.1 ikhutshwa nge-8 kaJanuwari, 2020
DataNumen Data Recovery 2.0 ikhutshwa nge-19 kaSeptemba, 2019
Phinda ubhale kwakhona injini yokuskena kunye nokubuyisa.
DataNumen Data Recovery 1.0 ikhutshwa ngo-Disemba 28, 2010
Inkxaso kuzo zonke iifomathi zokuqhuba.
Ukufumana kwakhona iifayile ezisusiweyo NTFS ukuqhuba.